ရိုဟင်ဂျာတွေ သာ အလိုတူခဲ့မယ်ဆိုရင်…..ဟဲ…ဟဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » ရိုဟင်ဂျာတွေ သာ အလိုတူခဲ့မယ်ဆိုရင်…..ဟဲ…ဟဲ
ရိုဟင်ဂျာတွေ သာ အလိုတူခဲ့မယ်ဆိုရင်…..ဟဲ…ဟဲ
Posted by ေအာင္ လ on Jun 20, 2012 in Politics, Issues | 29 comments
မကြာခင်ဖြစ်လာမည့် ရခိုင်နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဒေါက်တာအေးကျော်(မသေမီ)နဲ့ အင်တာဗျူး။
မေး ။….. ဆရာကြီးတို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့ ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာ နေတာထက် ခွဲထွက်ပြီး သီးခြားနိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့ ဘာကြောင့် ကြိုးပမ်းနေရတာလဲ။ ပြီးတော့ အဲလို ခွဲထွက်ပြီး သီးခြားနိုင်ငံ တည်ထောင်နိုင်ဘို့ ဘာတွေ ဘယ်လို အဆင့်ဆင့် လုပ်ယူရသလဲ။ဘယ်အချက်ပေါ် အခြေခံပြီး သီးခြားနိုင်ငံတောင်းရတာလဲ ခင်ဗျ။
ဖြေ ။….. ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ မေးထားတဲ့ အချက်အားလုံးကို တစ်ခုချင်းစီ ဖြေသွားပေးပါမယ်။
ဆရာဂီးတို့ ရခိုင် ရခိုင်ဆိုတာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်က ရခိုင်ရယ် ဘင်္ဂလာဒေ့ချ်ဘက်ခြမ်းက ရခိုင်ရယ် ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ရခိုင်နိုင်ငံတော်ရယူဖို့အတွက် ဦးစွာ လူအင်အားစုဆောင်ရပါမည်။အဲဒီလို လူအင်အား များပြားလာအောင် ဘင်္ဂလာဒေ့ချ်ဘက်ခြမ်းက ဘင်္ဂလီရခိုင်တွေကို တိတ်တစိတ် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲ ခိုးသွင်းလာတယ်။ဘင်္ဂလာဒေ့ချ်ဘက်ခြမ်းမှာ ကျန်နေသေးတဲ့ ဘင်္ဂလီရခိုင်တွေကို လိုအပ်ရင် အင်အားပြနိုင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားစီစစ်ရေး ကဒ်အတုတွေကို ပြုလုပ်၍ ဘင်္ဂလာဒေ့ချ်က ဘင်္ဂလီရခိုင်အတုများကို အိမ်အရောက်ပို့ပေးထားခဲ့တယ်။ ရခိုင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်မြောက်ရေး စီးမံကိန်းမှာ နေရာဒေသ နှစ်ခုကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာ တည်းရှိနေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရယ် ဘင်္ဂလာဒေ့ချ်နိုင်ငံထဲက စစ်တကောင်း တောင်တန်နယ်ရယ် ပေါင်းပြီး ရခိုင်နိုင်ငံတည်ထောင်ကြမှာပါ ။ဆရာကြီးတို့ ရခိုင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့က စစ်တကောင်း တောင်တန်းမှာ နေထိုင်သူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကို ရခိုင်ဟုသက်မှတ်ပါတယ်။ဒီအတွက်လဲ ကျွန်တော်ရဲ ့
တပည့်ကျော်ကြီး ဒေါက်တာအေးချမ်းကို သမိုင်းသစ်တစောင်ပြုစုခိုင်ပြီး ဘင်္ဂလာဒေ့ချ်နိုင်ငံ စစ်တကောင်း
တောင်တန်းကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံးကို ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ကြောင်း ရွှီးထားပေးဖို့ မှာလိုက်ရတာပေါ့။
ဒါ့အပြင် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည်သူ ရခိုင်လူငယ်တိုင်း ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မှာ စစ်ပညာကို
မသင်မနေရ အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီး စစ်ပညာသင်ယူရန်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မှာ
စစ်ပညာသင်ယူနေသူ လူငယ်တွေဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်က လာရောက်သင်ယူနေသူ တစ်ဦးမှမရှိကြပါဘူး
ဒါကြောင့် ဘင်္ဂလာဒေ့ချ်နိုင်ငံ စစ်တကောင်းနယ်မှ ဘင်္ဂလီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ခေါ်ယူလေ့ကျင့်ပေးနေ
ရတာလေ။စစ်တကောင်းလူမျိုးဆိုတာလဲ ရခိုင်လူမျိုးတွေဘဲမဟုတ်လား သူတို့လေတွေက ရခိုင်နိုင်ငံတော်
တည်ထောင်ဖို့ပိုပြီး စိတ်ထက်သန်နေကြတာလေ အဲဒီအတွက် သူတို့ကိုဘဲ ခေါ်ယူလေ့ကျင့်ပေးနေရတာပေါ့။
ရခိုင်လူမျိုးတွေက ပြည်ထောင်စုမှာ နေရတာထက် ခွဲထွက်ပြီး သီးခြားနိုင်ငံ ဘာကြောင့် လိုချင်းနေသလဲ ဆိုရင် အဲဒါက ရှင်းပါတယ် ရခိုင်တွေက ဗမာတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာ မနေနိုင်ဘူး မနေချင်းဘူး ဗမာအမျိုးသားတွေက ရခိုင်လူမျိုးတွေကို စစ်ရှုံးကိုလိုနီ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကျွန်လို ဆက်ဆံကြတယ်။
သီးခြားနိုင်ငံ တည်ထောင်ဖို့ ဘာကြောင့် ကြိုးပမ်းရသလဲ ဆိုရင် ရခိုင်လူမျိုးဆိုတာ အားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ လူမျိုးတွေထဲမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပထမဆုံး လက်ခံယုံကြည်ခဲ့သူဖြစ်ခဲ့သောကြောင်း အမျိုးကိုစောင့်တယ်၊ ဘာသာကိုစောင့်တယ်၊ကိုယ့်ဘာသာစကားကိုစောင့် တယ်၊အမျိုးကိုထိရင်နာတတ်တဲ့ လူမျိုးလို့ ရှေးလူကြီးတွေက ပြောခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်အခြား မျိုးမတူတဲ့ လူမျိုးတွေနဲ့ လက်တွဲပြီး မနေချင်းတာလည်းပါ ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်ခုကို တည်ထောင်တော့မယ် ဆိုရင် အဓိကထား စဉ်းစားရမည့် အချက်တွေကတော့ သီးခြားနိုင်ငံရပြီးသွားတဲ့ နောက်ပိုင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဒေသတွင်းက ပြဿနာတွေကို အရင် အလေးထား စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ ဥပမာပြောရရင် အစ္စရေနိုင်ငံ တည်ထောင်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်မှာ ဖြစ်လာနေတဲ့ ပြဿနာပေါ် အခြေခံပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်။ အစ္စရေနိုင်ငံဆိုတာလည်း ဟိုကနည်းနည်း ဒီကနည်းနည်း ဖဲ့ယူပြီးမှ နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာတာမဟုတ်လား။
ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်တွေကျတော့ ဂျူ တွေခံနေရသလို မဖြစ်ရလေအောင် ကြိုးတင် ပြင်ဆင်တဲ့ အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ဒုတိယ လူများစုဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို စောစောစီစီ ရှင်းပစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုသာ ကြိုတင် မပြင်ဆင်ဘူးဆိုရင် သီးခြားနိုင်ငံတည်ထောင်ပြီးနောက်ပိုင် ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကိုရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
လွတ်လပ်ရေးနောက်ပိုင် တုန်းကလည်း ရခိုင်တွေက သီးခြားပြည်နယ် တောင်းခဲ့ဖူးတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေက ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ပေါင်းစည်းပြီး မနေနိုင်ဘူး ပြည်မနဲ့ဘဲ တွဲပြီးနေချင်းတယ်ဆိုပြီး တောင်းခဲ့ဖူးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်တွေက အခဲမကြေ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီတုန်းကသာ ရိုဟင်ဂျာတွေက ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်နဲ့ ပူပေါင်းခဲ့ရင် အခုလောက်ဆိုရင် ရခိုင်ဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်အာဏာနဲ့ ဖြစ်နေေလောက်ပြီး။ နေရာဒေသ တစ်ခုထဲမှာ အတူနေထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရခိုင်နဲ့ မပူးပေါင်းဘဲ နယ်ချယ့် ဗမာတွေကို အားပေးအားမြောက် လုပ်ခဲ့လို့ ရလုဆဲဆဲ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံကို ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်တွေက လက်လွှတ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလို နောက်တချိန် ထက်မဖြစ်ရအောင် ရိုဟင်ဂျာတွေကို စောစောစီစီ ရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ဘာသာ သူတို့နှစ်ပေါင်း ဘယ်လောက်ဘဲ နေခဲ့ နေခဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာ ရခိုင်တွေပိုင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ ရခိုင်က လွဲပြီး မည်သူမှ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို မအုပ်ချုပ်ရဘူး။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို သိပ်မကြာခင် ရလိမ့်မည့်ဟု မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လိုလဲ ဆိုရင် ရခိုင်နိုင်ငံဆိုတာ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ရခိုင်လူမျိုးတွေကဘဲ ပိုင်သင့်တယ်။ တစ်ကမာ္ဘလုံး အတိုင်းတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ရခိုင်နိုင်ငံကို မပေးဘဲ တင်းခံနေလို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။ပေးကိုပေးရမှာပါ။
အော်..ဒုက္ခ၊ ဒုက္ခ..မြန်မာပြည်မှာနေ..မြန်မာ့ရေသောက်..မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ဆန်စားပြီး..ဘယ်နဲ့ နယ်ချဲ့ခံရတယ်ဆိုပါလား။ ဖတ်ဖူးသမျှပို့စ်ထဲမှာ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ရတာ စိတ်အဆင်းရဲဆုံးပဲ..
တို့ကတော့ ဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲ သွေးခွဲခွဲ ရခိုင်လူမျိုးတွေချစ်တဲ့ ဗမာလေးပါ။ လာသွေးမခွဲနဲ့ မရဘူး။
ဗမာနဲ့ ရခိုင်ကို ပြန်တိုက်ပေးနေပါ ပကောလား……………။
ကိုဖရဲရယ် စိတ်လျှော့ပါ။ အလကားနေရင်း အသက်တိုမခံပါနဲ့။ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ လှည့်တိုက်ပေးတတ်တာ သူတို့အကျင့်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဖတ်ပြီးကတည်းက မမန့်ဘူးလို့စဉ်းစားထားပေမယ့် ကိုယ့်ရွာသားတွေကို ဒေါသထွက်ပြီး အသက်မတိုစေချင်လို့ပါ။
ဒီပိုစ့် ကို ဥပေက္ခာ ပြုရင်းနဲ့ သပိတ်မှောက်ကြရအောင်။
မှန်ပါတယ် မတန်တဲ့သူတွေကို မတန်သလိုဆက်ဆံတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ..
““ ဥပေက္ခာ ပြုရင်းနဲ့ သပိတ်မှောက်ကြရအောင်။““
ရွာသူ၊ ရွာသားများ တပ်စုသတိ ရန်သူချဉ်းကပ်လာနေပြီ။
အားလုံး သတိ၊ အေးစေ၊ သက်သာ၊ နေမြဲ။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံ တနိုင်ငံ လုံး ဖူးပွင့် စ ဒီမိုကရေစီ မှ ပြည့် ဝ သည့် ဒီမိုကရေစီ သို့ လက်တွဲ ညီ ချီတက်နေချိန်မှာ လွတ်လပ် ငြိမ်းချမ်းမှု သည် လည်း အဓိက နေရာ တစ်နေရာ တွင် ရပ်တည်နေပါ သည်။
မိမစစ် ဖမစစ် တွေ ရဲ့ ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှုကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်နေရ သော ရခိုင်တိုင်ရင်းသား များ သွေးချင်း ညီကိုမောင်နှမများ ရေ ဘယ်သူတွေ ဘာ ပြောပြောပါနော်။
လူပြော လူယုံ ဆိုတဲ့ စကား ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား။
သမိုင်းက အဲ့နေ ့ကကျောင်းမတက်လိုက်ဘူး။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် ဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့က ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ၏ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ရခိုင်တိုင်းရင်း သား ၁၁ဦး အသတ်ခံရပြီး ရဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ကူတောင်ကျေးရွှာ ဒေသခံများကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရ သိရှိ ရသည်။
ဘင်္ဂါလီများ နေထိုင်ရာ အနောက်ပြင်ကျေးရွှာမှ ဆူပူ အကြမ်းသူများသည် ဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့ (ယနေ့) နံနက် ၅နာရီခန့်တွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ရာ ကူတောင်ကျေးရွှာကို ဝင်ရောက် မီးရှို့ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးသူများကို ပြန်လည် နှိမ်နှင်းရာမှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ အနောက်ပြင် ကျေးရွှာနား သို့ အရောက်တွင် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့ ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
“မီးတိုက်တဲ့သူတွေကို ရွှာသားတွေက လိုက်ထုတ်ကြတယ်။ လိုက်ရင်းနဲ့ အနောက်ပြင် ရွှာအနား ရောက်တော့ ဘင်္ဂါလီ တွေ လူစုပြီးစောင့်နေတယ်။ အဲဒီမှာ အသတ်ခံရတာ။ ထောင်ချောက်ဆင် ထားတဲ့ပုံစံပဲ“ ဟု ကူတောင်ကျေးရွှာ ဒေသခံ တစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
“သေသွားတဲ့ အလောင်းတွေကို ပြန်ပေးဖို့ စစ်တပ်က ပြန်တောင်းနေတယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေက မပေးဘူး“ ဟု ကူတောင် ကျေးရွှာမှ ဒေသခံတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးသူများထဲတွင် ကျောင်းဆရာနှစ်ဦး၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးမှ စာရေးမ တစ်ဦး တပ်မတော်သား အငြီမ်း စားတစ်ဦး ပါဝင်ကြောင်း ကူတောင်ကျေးရွှာ ဒေသခံများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့ ညနေ လေးနာရီများတွင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်များ အရ ရသေ့တောင်မြို့နယ်မှ တပ်မတောင်သား ၃ဝကျော် ဝင်ရောက် ထိန်းသိ်မ်းနေကြောင်း ကူတောင် ကျေးရွှာ ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ The Voice Weekly က ရသေ့တောင်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ သတင်းပြန်ကြား အဖွဲ့များသို့ ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် လူ ၅ဝဦးသေဆုံးပြီး ၅၈ဦး ဒဏ်ရာရရှိကာ နေအိမ်နှင့် အဆောက် အအုံ ၂၅၀ဝကျော် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာများတွင် ဇွန်လ ၁၅ရက်နေ့က တရားဝင်ထုတ် ပြန်ထား သည်။
လူမှန်လျှင် နားနှစ်ဖက် ၊ မျက်စိနှစ်ဖက်ပါကြသည် ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုရှိကြသည် ၊ ဖင်ပိတ်ငြင်း လိုရာဆွဲပြောသော သူသည် တိရိစာ္ဆန်ဦးနှောက်သာသာ သာရှိသည်
“လူမှန်လျှင် နားနှစ်ဖက် ၊ မျက်စိနှစ်ဖက်ပါကြသည် ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုရှိကြသည် ၊ ဖင်ပိတ်ငြင်း လိုရာဆွဲပြောသော သူသည် တိရိစာ္ဆန်ဦးနှောက်သာသာ သာရှိသည် ” ဒီစကားလေးသဘောကျလို့ပါ etone ရယ်..။
ကျုပ် သဂျီး ကို သံသယဝင်နေဘီ…
ဒီ “ဝထကလသ”ကောင်တွေရဲ့ ဒီလို post တွေကို
မမြင်တာလား.. မသိလိုက်တာလား..ဘာလား ညာလား….လားလားလား…..
ဖတ်ရင်းဒေါသထွက်ရင်း ဆိုတော့ ကြာရင်..မရေးသင့်တာတွေ ရေးမိရင် …..
အရာ ကြီးတွေ မာမူကြီးတွေ အပြင် ခတကလ တွေနဲ့ပါ …ထိပ်တိုက်တွေ့တော့မယ်…
မပြောတော့ဘူးဗျာ ဒီကောင်တွေအောက်ဝင်လဲ မန် ့ရသေးတယ်။
အနီကလဲ ထိပြန်ပီ။ကိုယ့်ဖာသာ အနီထိလို ့ပို ့စ်တောင်မရေးနိုင် စိတ်ညစ်
မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံရေးထားတဲ့ ဟာမှန်း အသိသာကြီး… နင် ကူးကူး နေတဲ့အဲဒီ site ကလည်း မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံပြီးတင်နေတဲ့ ဟာမှန်း ထမင်းစားတဲ လူတိုင်းသိတယ်..။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့ ကူတောင် အဓိကရုဏ်း ဖြစ်စဉ်
Arakan Times, 20June 2012 —- ဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့ နံနက် ၅နာရီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကူတောင်ရွာ အဓိကရုဏ်းတွင် ဘင်္ဂလီမူဆလင်များသည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့် အဓိကရုဏ်းဖြစ်အောင် စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ကူတောင်ရွားအနားမှ ပိုက်ဆိပ်ရွာရှိ ဘင်္ဂလီမူဆလင်များသည် ၎င်းတို့ပိုက်ဆိပ်ရွာပတ်လည်တွင် ထောက်ချောက်ဆင်ပြီး ဘင်္ဂလီမူဆလင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှ ကူတောင်ရွာပြင်ရှိ အိမ် ၄အိမ်ကို စတင်မီးရှို့ပြီး ကူတောင်ရွာသားများအား ပြန်လည်တုံ့ပြန်လာအောင် လှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဘင်္ဂလီမူဆလင်တွေက သူတို့ရွာပတ်ပတ်လည်မှာ မြောင်းတူးထားပြီး ပုလင်းကွဲတွေကိုချထားတယ်၊ ပြီးတော့မှ မနက်၅နာရီလောက်မှာ ဘင်္ဂလီမူဆလင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလာပြီး မီးရှို့တယ်၊ မီးလောင်တော့ တစ်ချို့ကမီးကိုငြိမ်းကြတယ်၊ နောက်လူတွေအများစုကတော့ အဲဒီ ဘင်္ဂလီမူဆလင် အမျိုးသမီးကို လိုက်ရင်းနဲ့ သူတို့ရွာထဲရောက်တော့ အဲဒီမြောင်းမှာ ကျွံကျသွားကြတယ်”ဟု အဓိကရုဏ်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သော ကူတောင်ရွာသားတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
အဓိကရုဏ်းတွင် ဘင်္ဂလီမူဆလင်များဘက်မှ ယမ်းထောင်းသေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့၍ ရသေ့တောင်မြို့ ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ဦးအောင်ခင်၏သား လက်မောင်းတွင် ယမ်းထောင်းသေနတ်ဒဏ်ရာဖြစ်ကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့ဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိဆရာဝန်၏ ဆေးမှတ်ချပေးခြင်းအရ သိရှိရသည်။
“အဲဒီမြောင်းထဲ ကျွံကျသွားတဲ့အချိန်မှာ ဘင်္ဂလီမူဆလင်လူအုပ်ထဲကနေ ယမ်းထောင်းနဲ့ ပစ်တယ်၊ ပစ်တော့ လူတွေလည်းကြောက်ပြီး ပြန်ဆုပ်ပြေးကြတယ်၊ ပြေးရတဲ့ လမ်းက လယ်ကွင်းလည်းဖြစ်၊ မိုးလည်းရွာနေတော့ ခြေကျွံတာနဲ့ မြောင်းထဲကျပြီး ဒဏ်ရာရထားတာနဲ့ ပြေးမရတဲ့လူတွေကို သူတို့က အနောက်ကနေ ဓားနဲ့လိုက်ခုတ်ကြတာ ဒဏ်ရာနဲ့လဲကျသွားတဲ့ လူတွေကိုဆွဲခေါ်ဖို့တောင် မရခဲ့ဘူး၊ ကူတောင်ရွာထဲကို ရွာသားတွေပြန်ရောက်တော့ ဘင်္ဂလီတွေက ရခိုင်အလောင်းတွေကို ဆွဲယူသွားကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရွာထဲတော့ သူတို့မလိုက်လာဘူး”ဟု ၎င်းရွာသားက ဆက်ပြောသည်။
အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားပြီး ညနေပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလီမူဆလင်တစ်ဦးမှ မြို့နယ်အုပ်ချူပ်ရေးမှူးနှင့် တပ်ရင်းမှူးထံသို့ ကူတောင်ရွာသားများတွင် ကျန်ခဲ့သော ယမ်းထောင်းသေနပ်တစ်လက်ဖြစ်ကြောင်းဟုဆိုကာ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
စစ်တပ်မှ သေဆုံးသူအလောင်းများကို ဘင်္ဂလီမူဆလင်ရွာနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လိုက်ရှာနေသော်လည်း ယခုချိန်ထိ မတွေ့ရသေးကြောင်းသိရှိရသည်။ ကူတောင်ရွာမှ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၈ဦးကို ရသေ့တောင် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ လူငယ်များ ကုသပေးလျက်ရှိပြီး ကျန် ၂ဦးမှာ ရသေ့တောင်ဆေးရုံနှင့် ၁ဦးကို စစ်တွေသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းသိရှိရသည်။
ယင်းကူတောင်အဓိကရုဏ်းကြောင့် ရသေ့တောင်မြို့ထဲရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ယခင်ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၅၁၅ဝဦးမှ ၅၇၀ဝအထိ တိုးလာခဲ့ကြောင်း ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ပြောပြချက်အရသိရှိရသည်။
Written by မင်းသွီး
မင်းရဲ့ရေးသားမူ.ဟာ တပါးသူတွေအတွက် အဆိပ် မဖြစ် သင်.ဘူး …..
အဲဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို စစ်တပ်ကခုထိမပြစ်သေးဘူးလား။ တော်တော်လေးကို ခံပြင်းစရာကောင်းနေပြီ။
ဒီလောက် ဒေသခံတွေကိုစော်ကားနေတာ နဲနဲလေးမှမထားသင့်တော့ဘူး။ အကုန်လုံးကို ပစ်သတ်ပြီး ဇာတ်သိမ်းသင့်နေပြီ။
ငါက ဗမာဘဲ။ဒါပေမဲ့ ခွေးပြောတဲ့ စကားခွေးတွေဘဲယုံမယ်။ဘယ်သူခွဲခွဲဒို့မကွဲ အမြဲစည်းရုံးမည်။သေတဲ့ သူပြောတယ်ဆိုပြီ ကိုယ်ပြောခြင်တာရေးတာ ကိုကအဆင့်မရှိလို့ မျိုးတူ ဘင်္ဂလားကတောင်လက်မခံဘူးတဲ့
Polices must straightly fire to those Liar Rohinjar without delay.
အဲ့ဒီ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ကောင်တွေကို အစိုးရက ကျည်နဲ့မပစ်နိုင်ခဲ့ဘူး
ဒီတော့က ဝက်သားတုန်းတို့ ဝက်ဆီတို့နဲ့ ပစ်ရင်မရဘူးလား
နယ်စပ်လုံခြုံရေးအနေနဲ့ ဝက်တွေကို နယ်စပ်တစ်လျှောက် စည်းတားသလို မွေးထားရင် မရဘူးလား
နယ်စပ်လဲလုံခြုံ မြန်မာ့စီးပွားရေးလဲတက် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပျက်ပဲ
ကိုယ့်လုံခြုံရေးအတွက် ဓား၊ လှံ စတာတွေကိုင်ရင် အဖမ်းခံရဦးမယ်
ဒီတော့က ဝက်ပေါင်တစ်ချောင်းလောက်ကိုင်ပြီး (ဟေ့ကောင်တွေ … လာရဲလာကြည့် … ဟော့ဒီမှာ ဓားထက်ဆိုးတဲ့ လက်နက်ကိုကြည့်စမ်း) ဆိုပြီး အဲ့ဒီ အသားမဲကောင်တွေရဲ့ရန်ကနေ ကာကွယ်လို့ရော
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ထဲမှာပဲရှိနေတာကောင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာ….ရခိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်ပြည်နယ်မှ ခွဲထွက်လိုမကောင်ပါဘူ..လိုထင်တယ်……ခွဲထွက်ရင်ဘယ်ဘက်မှကောင်ကျိုးရှိမယ်လိုမထင်ပါဘူး…..မထွက်စေချင်ဘူးဗျာ….
ဒီမယ် ဒီမယ် ကျုပ်ကရင်လဲ ညီအကို တိုင်းရင်းသားရခိုင်တွေကိုထိရင်
မခံဘူးဗျာနော် ၊ ခင်ဗျားတို့ ရမ်းရမ်းဟောင်မနေနဲ့ လက်တောင်မှ
ယားစိစိဖြစ်လာပြီ ၊ အေးဆေးနေကြစမ်းပါ ၊
ကရင်သွေးက ရဲရဲနီတာ သတိထားကြ ။
ကိုဝင်းခန့်ရေ ခင်ဗျာပြောသလို ဝက်ပေါင်ခြောက်နဲ့
ခြောက်လိုကတော့ ဖြစ်မယ် မထင်ဘူး
ဒိသရေကြိုး တစ်ပြားတွေက ငတ်မွတ်ခြင်းတိုင်းပြည်က
တွေ့ရာ အကုန်စားမှာ (ကိုယ်ဟာကို လုံအောင်ဖိနော်)
ဝက်သားတွေ ဈေးတက်နေပါဦးမယ်၊ မလုပ်ပါနဲ့ ဗျာ
ခင်ဗျာ ခေါင်းထည့်ကို ဥဏှောင်း ထည့်ဖို့အလာလ် မေ့သွားတယ်ထင်တယ်…
ဒီပို့စ်ကို.. အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တာတွေဖယ်ပြီး.. အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့.. သေသေချာချာဖတ်ကြည့်ဖို့သင့်တယ်..။